तपाइलाई थाहा छ, महिलाले लगाउने शर्टको बटन किन सधैं बायाँतर्फ हुन्छ ?
आजको आधुनिक जमानामा हामी तपाइलाई पुरुष र महिलाको शर्टको यस्तो अन्तर बताउन गइरहेका छौं जसमा तपाइँले आजसम्म ध्यान नदिनु भएको हुनसक्छ। तपाइले अहिलेसम्म कयौं महिलाले शर्ट लगाएको देख्नु भएको होला, तर महिलाको शर्टमा लगाइएको बटन सधैं किन बायाँ स्थानमा हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्नु भएको छ ? जबकि पुरुषको शर्टको बटन सधैं दायाँतर्फ मात्र हुन्छ।
शर्टमा लगाइएको बटनको दिशाको सम्बन्ध नेपोलियन बोनापाटको जमानासँग जोडिएको छ। नेपोलियन आफ्नो शर्टको बटम लगाउनकालागि हातको प्रयोग गर्थे। जसका कारण उनले धेरै समस्या भोग्नुपर्यो। नेपोलियनले त्यो बेला शर्ट बनाउने सबैलाई महिलाले लगाउने शर्टको बटन बायाँ लगाउन निर्देशन दिएका थिए।
१३ शताब्दीकी धनी महिलाले आफूलाई कपडा लगाइदिनलाई नोकर राखेका थिए। त्यो बेलाका धेरै जसो सेवक दायाँ हात चलाउँथे। त्यसकारण महिलाहरुको शर्टको बायाँतर्फ लगाइएको बटन लगाउन उनीहरुलाई असहज हुन्थ्यो। यस्तोमा कुनै महिला बच्चाकी आमा पनि हुन्थे र धेरै जसाेले बच्चालाई बायाँ हातले समाउँथे। यस्तोमा शर्टको बायाँतर्फ लगाइएको बटन दाया हातले खोलेर सजिलै स्तनपान गराउँथे।
पुरुषको शर्टमा दायाँतर्फ बटन हुनुको सबैभन्दा धेरै फाइदा युद्धका बेलामा हुन्थ्यो। धेरै जसो योद्धा आफ्नो दायाँ हातमा हतियार राख्थे। यस्तोमा बाँया हातले आफ्नो शर्टको बटन खोल्न निकै सजिलो हुन्थ्यो ।
← विश्वको सबैभन्दा महंगो डिभोर्सको मूल्य ३६ अर्ब डलर। पाउने महिला धनीको सूचीमा आइन्।
सूचनाः वडामा गएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा निवेदन दिन चाहिने कागजातहरु हेर्नुहोस्। →